Are Bụghị Onye Ọrụ Gị | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na azụmahịa gị, ị maara karịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla banyere ihe ị na-eme yana gbasara nkọwa nke ngwaahịa gị. Ngwaahịa gị, n'agbanyeghị, nwere ike ịbụ ọrụ, weebụsaịtị, ma ọ bụ ezigbo mma. Ihe ọ bụla bụ gị Ngwaahịa, ị nwere ike ịhụ nka gị na amamihe gị n'akụkụ ọ bụla nke ya. Nsogbu di? ndị ahịa gị enweghị ike.
Ndị ahịa kwesịrị iji ngwaahịa gị mezue ọrụ ka ha nwee ike ịga n'ihu na ọrụ ndị ọzọ ha chọrọ iji mezue. Ndị ahịa gị niile hụrụ na ngwaahịa gị bụ ngwa ọrụ iji nyere ha aka imezu ebumnuche.
Iji mepụta ngwaahịa na-aga nke ọma, ị kwesịrị ịghọta onye na-eji ngwaahịa ahụ na ihe kpatara ha ji eji ya. Kwesịrị ịnakwere na anaghị emepụta ngwaahịa a maka gị.
Kedu ka ị ga - esi chọpụta ihe ndị ahịa gị chọrọ?
Jụọ ha? ọ dịghị njọ, ọ dị nfe ahụ.
Lelee ndị ahịa na-eji ngwaahịa gị. Dekọọ nsogbu ọ bụla ha nwere na ụdị ozi ha tụrụ anya ịhụ na ngwaahịa gị.
Nwalee atụmatụ ọhụrụ, arụmọrụ, na imewe. Ndị ahịa hụrụ n'anya na-enye nzaghachi, ha ga-enwekwa ahụmịhe ọrụ ka mma n'ọdịnihu n'ihi na ọ dị ha ka ha nyere aka mee ka ngwaahịa ọhụrụ ahụ ka mma.
Mụta ihe ndị ahịa gị chọrọ agaghị abụ ihe ịchọ mma, ọnụ, ma ọ bụ na-eri oge.
Cheta, ị bụ ọkachamara, mana ndị ahịa gị abụghị.
Nye ha gini ị -eche ha chọrọ, ha ga-agakwa ebe ọzọ.
Nye ha gini ha n'ezie mkpa, ha ga-ahụkwa gị n'anya maka ya.
Jun 19, 2010 na 4:34 AM
Ọmarịcha post, mkpa ọ dị inweta “You bụghị onye ọrụ gị” enweghị ike ịkọwapụta oge zuru oke!
M gbasaa na edemede gị na ihe egwu nke ịghara ịghọta ụkpụrụ dị n'azụ "are bụghị onye ọrụ gị" na blọọgụ m - http://www.webusability.se/blog/2010/06/19/the-dangers-of-you-are-not-your-user/